Andro: 3 Novambra 2019
TravelExpo 4. Ankara Tourism Tourism 14-17 Novambra 2019
Ankara manonitra ny tsy fahampian'ny taona. Hiara-hiasa ny serivisy famokarana sy fandraisana ny serivisy, tsy misy mpanelanelana, ary hamolavola ny drafitra fitsangatsanganana. Afaka tratranao ireo safidy rehetra mifandraika amin'ny fialantsasatra ary mitsangatsangana amin'ny TravelExpo Ankara Fair imiz [More ...]
Ataovy mety amin'ny fiara fitaterana bisikileta ny fiaran-dalamby; Ny olom-pirenena iray miasa amin'ny biraon'ny Ombudsman (OIK) dia mino fa ny fihodinana bisikleta dia ampahan'ny fiainana maoderina ary izany a [More ...]
Istanbul Metro sy Metrobus Lines Metrobus Stations Metro Station Names: Istanbul Metro sy Metrobus Lines (Azo inoana), Beylikdüzü Metrobus, rafi-pitaterana, zotra Aksaray seranam-piaramanidina, Istanbul Metropolitan monisipaly Metro ary Metrobus [More ...]
Tapitra ny Tompondakan'ny bisikileta tsy misy fihainoana eran-tany
Gaziantep Biraon'ny Governora amin'ny fandrindrana, Gaziantep Metropolitan Monisipaly Tanora sy Fanatanjahan-tena amin'ny departemantan'i Services Fiadidiana an'i Torkia Roman Catholic World Roman Catholic Cycling Championships natao tao fiaraha-miasa amin'ny Federasiona ny Fanatanjahantena sy ny 36 72 kilometatra isa [More ...]
Taorian'ny fihaonana an-tampon'ny Kartepe, izay vita tamin'ny fanintelony niaraka tamin'ny lohahevitry ny Mutlu Urbanism sy Happy City de vao haingana, ny famantarana "Happy City Kocaeli" dia nahasarika ny saina ny fomba fitaterana an'i Kocaeli Metropolitan Munisipaly. Olom-pirenena hita tamin'ny famantarana ny fiara 'Sambatra [More ...]
Birao fitsangantsanganana Derince Travel
Ny biraon'ny carte de derince dia napetraka; Ny faritry ny serivisy atolotra ho an'ny olom-pirenena nomen'ny Kocaeli Metropolitan Municipality of Munich of Transportation and Management Management dia nitohy. Amin'izany toe-javatra izany dia ny kaominina Metropolitan, Derince ary ny maha-mponina ao amin'ny faritra [More ...]
Androany amin'ny tantara: 3 Novambra 1918 Vondron'ilay komandin'ny tafika tselatra
Androany amin'ny tantara 3 Novambra 1918 Ny komandin'ny tafika matanjaka Mustafa Kemal Pasha, na dia notohanan'ny tafika Entente hiarovana ny Taurus Tunnels aza, dia nitohy ny vondrona miaramila tiorka [More ...]